सांगीतिक तला थप्दै कन्हैयाले ल्याए आलाप–३ - MusicKhabar.com: Nepal's No. 1 Musical Newspaper
सांगीतिक तला थप्दै कन्हैयाले ल्याए आलाप–३
प्रकाशित: २४ कार्तिक २०७४, शुक्रबार
२४ कार्तिक, २०७४ काठमाडौं । लोकप्रिय गायक कन्हैया सिंहको आधुनिक गीतिसंग्रह आलाप–३ (वारे वा) सार्वजनिक भएको छ । नेपाल संगीत तथा नाट्य प्रज्ञा प्रतिष्ठानका उपकुलपति शम्भूजित बास्कोटाको प्रमुख आतिथ्यतामा आलाप–३ को सार्वजनिक गरिएको हो । ललितकला प्राज्ञ प्रतिष्ठानका प्राज्ञ ज्योतिप्रकाश वि.क., चलचित्र पत्रकार एवं साहित्यकार शान्तिप्रिय, संगीतकार सन्तोष श्रेष्ठ, गीतकार डीआर, गायक कन्हैया सिंह एवं टीकागोपाल डिजिटल एम. क्रियशनकी व्यवस्थापक गीता सिंहले प्रमुख अतिथि बास्कोटासँगै सार्वजनिक गरेका थिए ।
म्यूजिक खबर डटकमको आयोजनामा भएको उक्त कार्यक्रमलाई स्वागत गर्दै गायक कन्हैया सिंहले अरुले घरको तला थपे होलान् तर मैले संगीतको तला थपिरहेको छु भन्दै आगामी दिन पनि नेपाली गीतसंगीतभन्दा पर नरहने बताए । अमेरिकाबाट छोटो समयमा नेपाल आउँदा प्राय गरेर आफूले गीतसंगीतको एल्बम बजारमा ल्याउने गरेको बताउँदै गायक सिंहले आलाप–३ सातौं कृतिका रुपमा बजारमा ल्याएको बताए ।
प्रमुख अतिथि नेपाल संगीत तथा नाट्य प्रज्ञा प्रतिष्ठानका उपकुलपति शम्भूजित बास्कोटाले गायक सिंहले घरको तला नथपे पनि संगीतको तला थपिरहेको देख्दा निकै खुशी लागेको बताए । विदेशमा बसेर पनि नेपाली गीतसंगीतकै लागि लगानी गरिरहनु, कलाकारकै हकहितका लागि कन्हैया सिंह लागिरहेको देख्दा विदेशमा गीतसंगीतको दूत बन्नुभएको हो भन्ने लाग्छ, उपकुलपति बास्कोटाले भने । संगीत क्षेत्रमा लगानी गर्नु जोखिम मोल्नु जस्तो भइरहँदा पनि उहाँको सक्रियता पक्कै संगीत उद्योगले सम्झनलायक भएको उनले बताए । कार्यक्रम गीतकार एवं पत्रकार सुमन बैरागीले संचालन गरेका थिए ।